Version 0.5.5 – Buddypress Nkwado
June 18, 2010 site na rịọ 20 Comments
Ndi afo ubọk gị vuvuzelas ma maka WordPress 3.0 tọhapụ? Ugbu a, i nwere ike ime nke ahụ ma na-enweta eziokwu nke ọhụrụ transposh ngwa mgbakwunye maka WordPress awade akwado ọhụrụ WordPress, ka a daashi, enyemaka maka buddypress. Nke a na-akwado maka buddypress ugbu a pụtara na urls eme ma zaa ọ ga-adị ugbu a, translatable.
More mgbanwe na-agụnye ndị ọzọ nkwado maka ọnọdụ mere ka UI unworkable, mgbe ihe atụ jQuery ngwaọrụ e ji ụfọdụ ngwa mgbakwunye ma ọ bụ isiokwu, ugbu a – anyị na-enwe ike ime ka ọ na-arụ ọrụ.
Dị ka nke ebe ọ bụ na a ọhụrụ isi version nke WordPress ke, anyị na-na-na idobe ukara nkwado maka ndị okenye WordPress 2.8 version, na ngwa mgbakwunye kwesịrị ka ọrụ, ma ọ gaghị na-anwale ma patched n'ihi na nsụgharị anyị nwere ike ikwu na ị kwalite.
Dị ka mgbe niile – anyị chọrọ ịnụ gị, ihe atụmatụ na ị chọrọ? nke otu ga-emeri ụwa iko? dị nnọọ dobe gị kwuru ebe a.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: General Ozi Akpado Na: buddypress, obere, tọhapụ, WordPress 3.0, WordPress ngwa mgbakwunye